Global Voices teny Malagasy » Naverina indray ny lalao football mozambikana ary vehivavy avokoa ny mpitsara telo tamin’ny fisantarana izany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Febroary 2021 5:09 GMT 1	 · Mpanoratra Dércio Tsandzana Nandika (en) i Liam Anderson, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Mozambika, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka, Vaovao Tsara, Vehivavy sy Miralenta
Andro faha-22 Moçambola Maxaquene 2 – 1 FC. Chibuto, avy @ Verdade  izay nametrahana lisansa CC BY 2.0 
Niverina  holalaovina tamin'ny 16 janoary indray ny fifaninanam-pirenena ho tompondakan'i Mozambika amin'ny sehatra matihanina amin'ny football, izay fantatra amin'ny anarana hoe Moçambola  rehefa niato nandritra ny 10 volana noho ny valan'aretina COVID-19.
Nosoritan'ny gazetim-panatanjahantena Lance  tao an-toerana ny tantaran'ireo vehivavy telo mpitsara lalao:
Tsy hisy mpijery ny fifanandrinana Moçambola mandra-pisian'ny filazana vaovao, natao izany hisorohana amin'ny fifindran'ny COVID-19. Hatramin'ny fotoana nanoratana, nahatratra 29.396 ny fitambaran'ny tranga voarakitra  ary 271 no matin'io aretina io tao Mozambika.
Misy ireo mpanohana sasany no mitaraina amin'ny toe-draharaha, toa an'i Maria Mufume, izay niteny  tamin'i DW Africa tao Maputo:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/02/03/151338/
 Andro faha-22 Moçambola Maxaquene 2 – 1 FC. Chibuto, : https://www.flickr.com/photos/95731954@N02/10399840633